माधुरी दिक्षितले इशानसँग रोमान्स गरेको सुहाउला त ? « Sajilokhabar
माधुरी दिक्षितले इशानसँग रोमान्स गरेको सुहाउला त ?
एजेन्सी, १९ मंसिर । बलिउडमा नायक र नायिकाको उमेर अन्तरको चर्चा सधै नै हुने गर्दछ । आफू भन्दा आधा उमेर कान्छी नायिकासँग बलिउडमा नाम चलेका नायकहरुले रोमान्स गरिरहेका छन् । तर, नायिकाको हकमा भने यो लागू भएको छैन ।
नायिक पूजा शर्माले स्टाटस लेख्दै भनिन्– कति चूप रहने ? कति सहने ?
काठमाडौँ, २४ साउन । नायिका पूजा शर्माले शुक्रबार साँझ फेसबुकमा एउटा आक्रोशपूर्ण स्टाटस लेख्दै एक
यी हुन् बलिउडका धेरै कमाई गर्ने अभिनेत्री
काठमाडौँ, २४ साउन । बलिउडमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने अभिनेत्रीहरुमा दीपिका पादुकोण र अनुष्का शर्मा
लोकगायक प्रेमराजा महत दम्पत्तिमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ, २४ साउन । लोकगायक प्रेमराजा महत दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । वरिष्ठ लोकगायक